Thwebula Connectify Hotspot 2016.0.3.36821 – Vessoft
Le software adingekayo .NET Framework ukugijima kahle
Thwebula Connectify Hotspot
Connectify Hotspot – iphasela isofthiwe ngalo computer yenza indima ukufinyelela phuzu ku-intanethi, uma kukhona ikhadi LAN noma i-adaptha olusekela Wi-Fi. Isofthiwe configures othomathikhi computer njengendlela router virtual eyenza ukufinyelela internet kusuka kumadivayisi ezahlukene. Connectify Hotspot kwenza ukubuka uhlu axhunyiwe, izibalo lokufinyelela phuzu ukusetshenziswa kanye nenani idatha adlulisiwe. Isofthiwe ivumela umsebenzisi ukuqinisekisa ukuphepha inethiwekhi, usebenzisa umbhalo wemfihlo ubuchule obuphezulu ehlukahlukene. Connectify Hotspot isekela inombolo enkulu ezenezelwe, okuvumela umsebenzisi ukunweba software.
Ukuguqula ikhompyutha yakho ibe router virtual
Ukufinyelela ku-intanethi kusuka kumadivayisi ezahlukene
Support for ubhalomfihlo ubuchule obuphezulu ezahlukene
Amazwana on Connectify Hotspot:
Connectify Hotspot Ahlobene software:
Internet Isofthiwe ukusebenza kanye emachwebeni modems kanye routers. Isofthiwe isekela inqwaba onobuhle ezahlukene imishini inethiwekhi.
English, Afrikaans, Українська, Français... Freegate 7.59
Internet Ithuluzi inikeza i ukufinyelela avinjiwe. Isofthiwe kwenza yokuwuthola block of ukucwaninga izici kokudala uxhumano ngokusebenzisa yangasese proxy amaseva.
Hotspot Shield 6.2 Free
Internet Ukubethelwa Isofthiwe uxhumano sivikelekile futhi silondekile sessions web internet. Ukuthi ubumfihlo banoma imiphi imisebenzi inthanethi ibangelwa ushintsho IP-ikheli yomsebenzisi.
English, Français, Deutsch, Italiano... The Bat! 7.4
E-mail Iklayenti esinamandla umsebenzi uphephile nge-imeyili. Isofthiwe kuqinisekisa isivikelo ngokumelene ogaxekile amafayela ayingozi.
English, Українська, Français, Español... SG TCP Optimizer 4.0.6
Internet Isofthiwe nokwandisa kwemigomo uxhumano lwe-inthanethi. Isofthiwe kunikeza ekhishwa enkulu komkhawulokudonsa.
Internet Inethiwekhi Testing Isethi free of network Izinsiza ukuthi kuhlanganiswe ibe software single. The amathuba ehlukahlukene control inethiwekhi ayatholakala umsebenzisi.
Imidlalo Isofthiwe ewusizo yenzelwe abantu abadlala imidlalo. Isofthiwe ikuvumela ukuba ushintshe imidlalo: ezingeni, Miningi imiphefumulo, imali, izikhali, njll
Seaside Multi Skype Launcher 1.23
Ukukhulumisana Voice Ewebhu Isofthiwe ukugijima futhi aphathe akhawunti amaningi Skype on computer eyodwa kuphela. Isofthiwe kwenza kalula ukushintsha phakathi akhawunti nasekuxhumaneni in izingxoxo eziningana ngesikhathi esisodwa.
Abanye Ithuluzi eliphumelelayo ukulawula izimali. Isofthiwe ikuvumela ukuba lokhozi izindleko noma izimali futhi zibonisa isimo sezimali ngesimo emagrafu.
English, Afrikaans, Українська, Français... iTunes 12.5.1
Abadlali Media Hambayo Umdlali ethandwa ukudlala amafayela emidya. Isofthiwe isekela ukuvumelanisa idatha phakathi kwekhompyutha yakho ne-Apple idivayisi.
English, Українська, Français, Español... EndNote 7.4
Office Umbhalo abahleli Ithuluzi ukuthola ukwaziswa database imitapo yolwazi kanye nezikhungo ngokwesayensi emhlabeni. Isofthiwe isekela ukuvumelanisa nge umtapo inthanethi inkonzo.